Man City vs Tottenham: Goorma ayaa la ciyaarayaa Final-ka Carabao Cup?… Maxayse ahayd sababtii ay xalay dhammaan xiddigaha Man City u xirteen lambarka 8-aad? – Gool FM
(Manchester) 07 Jan 2021. Manchester City ayaa xalay guul ka soo gaartay Manchester United, waxaana ay final-ka tartanka Carabao Cup ku ballansatay Kooxda Tottenham.
Pep Guardiola iyo Jose Mourinho oo ah labo tababare oo waa weyn ayaa isaga hor’imaanaya Final-kan, haddaba goorma ayaa la ciyaari doonaa?, maxayse ahayd sababtii ay xalay dhammaan xiddigaha Manchester City u xirteen lambarka siddeed ka hor kulankii ay ka adkaadeen Man Utd.
Man City waxa ay iska xaadirisay Final-ka Carabao Cup kaddib markii ay 2-0 uga soo tallaabsatay dariskeeda Manchester United, kulankii xalay ka dhacay garoonka Old Trafford.
Kulankan ayaa lagu kala nastay barbaro goolal la’aan ah inkastoo uu birta garaacay Kevin De Bruyne, sidoo kale goolal ka dhashay labada dhinac oo saddex ahaa lagu diiday inay ahaayeen garab dhaaf (Offside).
Man City ayaa goolasha ay ku adkaatay heshay qeybta labaad kaddib markii uu goolka hore lugta dhuftay John Stones kaddib laad xor ah oo jaranjeer laga soo qaaday.
Man United ayaana goolka labaad loogu shubay iyadoo ay ciyaarta ka harsan tahay todobo daqiiqo, waxaana darbo xooggan goolhaye Dean Henderson daba mariyey Fernandinho kaddib koorno uu soo qaaday De Bruyne.
Tottenham Hotspur oo afar dhammaadka tartankan ku soo garaacday Kooxda Brentford habeen hore ayaa Final-ka Carabao Cup la ciyaari doonta Manchester City.
Labada Tababare ee Jose Mourinho iyo Pep Guardiola ayaana isku wajihi doona Final-ka Carabao Cup oo bisha April ka dhici doona gaaroonka Wembley.
Kulankan Final-ka ayaa imaanaya xilli Man City ay raadinayso inay ku guuleysato tartankan xilli ciyaareedkii afaraad oo xiriir ah, xilli Jose Mourinho uu doonayo inuu Spurs u gacan geliyo koobkan 13-sano kaddib.
Dhinaca kale dhammaan xiddigaha Manchester City ayaa xirtay lambarka 8-aad iskululeyntii ka horreysay kulankii xalay ee Man United ay ka adkaadeen, waxaana ay ugu baroor-diiqayeen halyeygii kooxda Colin Bell, kaasoo geeriyooday Talaadadii.